Allgedo.com » 2012 » June » 16
Home » Archive Daily June 16th, 2012 Dowladda TFG oo caawa bandoow kusoo rogtay degmada Afgooye ee gobalka Sh/hoose. Jun 16, 2012 Dowladda TFG ayaa caawa bandoow waxay kusoo rogtay degmada Afgooye gaar ahaan deegaanada ka dhaw halka uu maanta ka dhacay qaraxa Ismiidaaminta ee lala eegtay xarun ay ku sugnaayeen ciidamada TFG ee degmadaasi.
Ciidamada ayaa caawa waxa ay dul wareegayaan xaafado ka mid ah degmada Afgooye iyaga oo baadi goobaaya goobo ganacsi oo furan iyo dad iska dhex socda xaafadaha, waxaana dadka reer Afgooye ay... Saraakiil AMISOM ah oo maanta gaaray Magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraan. Jun 16, 2012 Waxaa maanta magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraan gaaray Saraakiil badan oo ka socotay AMISOM si ay usoo indha indheeyaan goobo la sheegay in dhawaan la dejin doono cidamo hor leh oo AMISOM ka mid ah gaar ahaan wadanka Jabuuti ka socda.
Saraakiisha marka ay tageen magaalada B/weyne waxay kulamo albaabada u xiran la yeesheen mas’uuliyiin ka mid ah maamulka gobalka Hiiraan, iyo saraakiil... Beesha Reer Siyaad Xuseed (Sade Darood) oo Maanta u Caleema Saaray Xilibaanka ay Beeshoodu ku yeelanayso Baarlamaanka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Salaad (Taako) kadib markii cod aqlabiyad ah uu kaga Guuleeystay Laba Musharax oo kale. Jun 16, 2012 Magaalada Muqdisho iyo Magaalada Caabudwaaq ayaa maalmihii ugu danbeeyayba waxaa ka socday shirar ay yeelanayeen beesha Reer siyaad Xuseen kaasoo ay ku kala saarayeen Sadex Musharax oo u sharaxneeyd Xilika Xilibaanimada Dawlada soo socota ee soomaaliya.
Sadexda musharax ayaa waxaa ay kala ahaayeen Xilibaan X/xafiid sacdi Jaamac oo ka mid ah hada mudanayaasha baarlamaanka ee xiligoodii uu sii dhamanayo... Somali American Women Foundation oo dhismaha Garoonka Diyaaradaha Cabudwaaq ka qaatay kaalin muuqata (Daawo Video) Jun 16, 2012 Columbus, Ohio (AOL) – Dadaalkii ugu xooganaa oo lagu taageerayo Garoonka diyaaradaha Calamigaa ee Caabudwaaq ayaa waxa uu ka soconayaa dalka Maraykanaka meelo ka mid ah, waxaana qaar ka mid ah aqoonyahano waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada Waqooyiga Galgaduud ay u istaageen sidii garab buuxa loo siin lahaa Ururka Somali American Women Foundation oo ah ururka kaliya ee sida buuxda waqtigiisa... WAR DEG DEG:- Qarax ismiidaamin oo goordhaw ka dhacay xarun ay ciidamada dowladda TFG ku leeyihiin degmada Afgooye. Jun 16, 2012 Qarax Isimiidaamin oo aad u xoogan ayaa goordhaw ka dhacay degmada Afgooye ee gobalka Shabeelaha Hoose waxaana qaraxaan lala eegtay xarun ay ciidamada dowladda KMG ay ku lahaayeen degmadaasi.
Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu soo waramaayaa in halkaasi lala galay, waxaana warar hor dhac ah ay sheegayaan in 3 qof ay goobta ku geeriyootay in kastoo qasaaraha uu intaasi ka badan yahay laakiin... Radio Allgedo/ Waraysiyo